Etu ị ga - esi họrọ onye mmebe weebụ | Martech Zone
Esi họrọ otu Web Designer
Otu enyi m jụrụ m na email, ị nwere ike ịkwado m onye mmebe weebụ? Akwụsịrị m maka otu nkeji… Amaara m ọtụtụ ndị na - emepụta websaịtị - ihe niile sitere na ndị ọkachamara na - emepụta akara, na ndị na - ese ihe nkiri mpaghara, ndị mmepe sistemụ njikwa ọdịnaya, ndị ọkachamara ịkparịta ụka n'socialntanet, na njikọta ihe mgbagwoju anya, ụlọ ọrụ na ndị mmepe ụlọ.
Azaghachiri m, “Gịnị ka ị na-achọ inweta?”
Agaghị m abanye nkọwa banyere ihe nzaghachi ahụ bụ ma ọ bụ ihe m tụrụ aro, mana ọ bụ n'ezie na:
Onye ahịa ahụ amaghị ihe ha na-anwa iji weebụsaịtị ha.
Designlọ ọrụ ụlọ ọrụ weebụ ha jikọtara na-eme ka ọrụ ha na onyinye ha.
E nwere ọtụtụ ụdị ndị na-emepụta weebụ karịa ka m nwere ike ịkọwa, mana ndị kachasị mma ga-amalite mkparịta ụka ha, "Gịnị ka ị na-achọ ime?" Dabere na azịza ya, ha ga-ama ma azụmaahịa gị ọ dabara na nke ha, na ngwụcha ma ha ga-eme nke ọma n’ibute ebumnuche gị. Jụọ ma soro ndị ahịa ha na nso nso a ka ha chọta ihe ederede maka ndị ahịa ndị ọzọ ha na ha rụkọrọ ọrụ nwere otu ebumnuche dịka nke gị iji chọpụta otu esi arụ ọrụ na ha.
I bu otu obere ulo oru na acho idi ka nke buru ibu? Na-achọ ịmata ụdịrị ama ama? Ntinye igwe njin? Yourlọ ọrụ gị ọ na-achọ ịwube ọnụ ụzọ iji kpọtụrụ ndị ahịa? Na atụmanya? You na-eji ngwaọrụ na ọrụ ndị ọzọ ị chọrọ iji rụọ ọrụ ma jikọọ na weebụsaịtị gị?
Dabere na Web Design gị na dollar dollar na pọtụfoliyo bụ egwuregwu dị egwu. Ohere bụ na ị ga-azụ ahịa n'oge na-adịghị anya ka teknụzụ na-aga n'ihu ma hụ na saịtị gị anaghị egbo mkpa ya. Ndị na-emepụta ihe kachasị mma na-ahụkarị usoro ewu ewu iji wuo saịtị gị ka o wee gbasaa ka ihe ọhụrụ achọrọ na-abịa. Ndị na-emepụta ihe kachasị mma ga-ele anya iji wulite mmekọrịta, ọ bụghị nkwekọrịta. Ndị na-emepụta ihe kachasị mma ga-eji ụkpụrụ weebụ kachasị elu na nnabata ihe nchọgharị.
Mee ka mmefu nke imewe weebụ bụrụ mmefu ego na-aga n'ihu kama ịmefu otu oge. Mee ka ịga n'ihu na-aga n'ihu kama ịmechaa ọrụ zuru oke. Ọ ga-akara m mma itinye atụmatụ otu ọnwa maka otu afọ karịa ichere otu afọ ka saịtị m dịrị ndụ!
Họrọ nke ọma na Web Designer gị nke ọma. Amaara m na e nwere ọtụtụ nnukwu ndị na-emepụta ihe (na ọtụtụ ndị na-adịghị mma). Ma, ọtụtụ mgbe, achọpụtara m na ọrụ imepụta web ọdachi nwere ihe jikọrọ ya na egwuregwu nke ndị nrụpụta weebụ na ebumnuche nke nzukọ a.
Tags: mmebeotu esi ahọrọ onye mmebe weebụesi achọta onye mmebe weebụonye mmebe weebụ
Nọgidenụ na a na na na gị 2009 Marketing Strategy
Jenụwarị 29, 2009 na 11:58 PM
Kwuru nke ọma! Ahụla m ọtụtụ ndị na-emepụta weebụ na ụlọ ọrụ weebụ na-echegbu onwe ha banyere otu ha nwere ike isi mee ka mmefu ego na saịtị dị iche na nke ọzọ na otu ha nwere ike isi nyere onye ahịa aka inweta uru kachasị maka saịtị ha.
Feb 2, 2009 na 8:57 PM
Echere m na ihe mere o ji sie ike nke ukwuu bụ na e nwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ ebe ahụ na-azọrọ na ha bụ ndị na-emepụta weebụ mgbe ha enweghị ikike, nghọta nke koodu, ma ọ bụ ihe ọmụma dị ugbu a.
N'oge na-adịbeghị anya onye m maara kpọrọ otu nwoke mpaghara maka atụmatụ maka saịtị maka azụmahịa ya. Nke a "ndị na-emepụta ihe" nwere peeji nke aka ya, yana pọtụfoliyo ya, nwere weebụsaịtị na tebụl kama iji css. Nkwupụta ya maka saịtị 5 bụ $ 1000. Ugbu a nke ahụ bụ naanị ụjọ.
Feb 4, 2009 n’elekere 1:43 nke abali
Amen ka nke ahụ. Ma ọ bụ ndị ahụ a na-akpọ ndị na-emepụta ihe na-enye ezigbo ndị nwere aha ọjọọ aha ọjọọ.
Na tụgharịa n'akụkụ, e nwere ahịa ndị na-eche na "ala akara" (na-eri) bụ naanị ihe dị mkpa. Nweta ihe ị na-akwụ ụgwọ n'ọtụtụ ọnọdụ. Mgbe ahụ, n'ezie, mgbe ha gakwuuru onye na-ese ihe na websaịtị ahụ ma nafee saịtị ahụ, ọ naghị eme ihe o kwesịrị ime yana kama ịta ndị ọ na-emepụta websaịtị ọnụego ha ụta, ọ kpebiri na ndị niile na-emepụta websaịtị. abụghị ihe ọzọ karịa ịkwụ ụgwọ ndị na-ese ihe. Itucha, lather, ikwugharị.
Otu onye jide ihe ọ myụ drinkụ m mgbe m na-arịdata na igbe ncha m!
Feb 4, 2009 n’elekere 7:02 nke abali
Eziokwu. Ọ bụghị naanị ndị na-emepụta weebụ dị mma ka mmadụ chọrọ. Ya streamlining gị mkpa na ndị kwesịrị ekwesị imewe eburu n'uche gị uche nke nzube na website nke na-aga na-enyere.